कति छ बंगलादेशका चर्चित अभिनेता आलम बोगराको सम्पत्ति ?
एजेन्सी । बंगलादेशमा एकजना यस्ता सुपरस्टार रहेका छन् जसलाई देख्नासाथ धेरै ह्याण्डसम युवाहरु आफ्नो भाग्यलाई सराप्न लाग्छन् ।
कति छ सुनिल सेट्टीको सम्पत्ति ?
फिल्मबाहेक यसरी पनि करोडौँ रकम कमाइ रहेका बलिउडका चर्चित अभिनेताहरु
बलिउड । बलिउडमा पछिल्लो समय अभिनय क्षेत्रमा मात्र सिमित नभइ साइड बिजनेश गर्ने ट्रेण्ड बढेर गएको छ । बलिउडका चर्चीत हस्तीहरु नै साइड बिजनेशमा लागिपरेका छन् ।
सारेगमप लिटिल च्याम्प्सको उपाधि सुगन्धा दातेले जितिन्, प्रितम सेकेण्ड रनर अप
एजेन्सी । सुगन्धा दातेले सा रे ग म प च्याम्प्स २०१९ को उपाधि जितेकी छिन् । अन्य फाइनाष्टिमा प्रितम आचार्य, आशा दास, आयुस के सी अनुष्का पत्रा र मोहमम्द फइज रहेका थिए ।
अभिनेत्री श्रद्धालाई ७४ वर्षीया बृद्धा बन्न प्रस्ताव
एजेन्सी । अभिनेत्री श्रद्धा कपूरले ७४ वर्षीया बृद्धाको भूमिका निभाउने भएकी छन् । तेलेगु फिल्म निर्माता सुरेश बाबुले सन् २०१४ को चर्चित कोरियन ड्रामा फिल्म मिस ग्रैनीलाई रिमेक गर्न लागेका हुन् । त्यसको मूख्य भूमिकामा अभिनेत्री श्रद्धा कपूरलाई प्रस्ताव राखेका छन् ।
‘धुम–४’मा भिलेनको भूमिका निभाउँदै शाहरुख खान ? यस्तो छ वास्तविकता
काठमाडौं/एजेन्सी । आदित्य चोपडा स्टारर् ब्लकबस्टर सिरिज फिल्म ‘धुम’को चौथो पार्टमा अभिनेता शाहरुख खानले भिलेनको भूमिका निभाउन सक्नेछन् ।